Xildhibaan ka Tirsan Golaha shacabka oo ka badbaaday Weerar lagu qaaday – GOBOLADA.COM
June 15, 2022 June 15, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Xildhibaan ka Tirsan Golaha shacabka oo ka badbaaday Weerar lagu qaaday
Faahfaahino ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday hoyga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee dalka, kaas oo loo adeegsaday bam-gacmeed, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Hay’adaha ammaanka.
Weerarka ayaa ka dhacay xaafadda Taleex ee degmada Hodan, waxaana lagu beegsaday guriga xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka ka soo galay dhanka Jubbaland, kaas oo laga soo doortey degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
xildhibaanka ayaa weerarka ka bad-baaday, balse waxa ay dhaawacyo soo gaareen qaar ka mid ah ilaaladiisa, kuwaas oo oo la geeyey goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho oo haatan lagu dabiibayo xaaladdooda caafimaad.
Wararka ayaa sheegaya sheegay in ragga weerarka qaaday ee bambada ku tuuray guriga xildhibaanka ay goobta isaga baxsadeen, inta aysan soo gaarin ciidanka amniga.
waxaa meesha tegay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka, gaar ahaan Booliska degmada Hodan oo uu horkacayey taliyaha saldhigga degmadaas, Xuseen Cad-Ceed, waxayna baaritaano ka sameeyeen Taleex, si loo soo qabto raggii geystay falkaasi.
Waa weerarkii labaad oo 24 saac gudaheed ka dhacaya Hodan waxaana habeen weerar kan la mid ah oo loo adeegsaday bamba gacmeed lagu qaaday sadhigga booliska degmadaasi.
Diyaaradaha dagaalka Kenya oo duqayn ka geystay degaano ka tirsan Gobolka Gedo
Puntland oo shaacisay Xilliga lagu dhawaaqayo xukunka Eedeysaneyaal loo haysto fal dil ah.